नेकपा विभाजनको अवस्थामा को कता ? पूर्वएमाले आधाआधा, पूर्वमाओवादी ? – Himalaya Television
नेकपा विभाजनको अवस्थामा को कता ? पूर्वएमाले आधाआधा, पूर्वमाओवादी ?
२०७७ पुष ७ गते १८:५२
गौतम र थापा अझै मौन
७ पुस २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको स्थितिमा पूर्व एमालेमा आधा आधा जस्तो देखिएको छ भने पूर्व माओवादीका थोरै मात्रै नेता केपी ओलीको पक्षमा लागेका छन् । केही नेता अहिले पनि अन्यौलमा देखिएका छन् ।
पूर्व माओवादी समूहका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा ओलीको पक्षमा लाग्नुभएको छ । तीनै जना स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । पूर्व माओवादीबाट ओलीको पक्षमा लाग्ने रायमाझी सबैभन्दा माथिल्लो वरियताको नेता हुनुहुन्छ ।
यस्तै नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने अझै दुवैतिर खुल्नुभएको छैन । दुवै जना आज दुवै गुटका बैठकमा सहभागी हुनुभएन । दुवै नेताले दुवै पक्षसँग केही दिन मागेका छन ।
बादल निकट केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले पार्टी विभाजन भैसकेको भन्दै दुई पार्टीलाई शुभकामना दिँदै अहिलेको अवस्थामा कतैतिर नलागेको जानकारी दिनुभएको ।
फेसबुकमार्फत सुवेदीले आफ्नो समूह छिटै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिनुभएको छ । पहिले ओलीको पक्षमा लागेको चर्चा गरिएको हरिबोल गजुरेल र रघुवीर महासेठ भने प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा उभिनुभएको छ ।
नेकपा पूर्वएमाले पूर्वमाओवादी विभाजन